eHimalaya Online || News from nepal » आजको राशिफल यी राशीहरुलाई निकै शुभ रहेको छ । तपाईको कुन पर्यो?
२०७८ माघ ९ गते आईतबार || 2022 Jan 23 Sunday
आजको राशिफल यी राशीहरुलाई निकै शुभ रहेको छ । तपाईको कुन पर्यो?
२०७७ माघ २३ गते शुक्रबार ०१:३६
मेष:- शुभ समय रहेको छ। बकाया रकम प्राप्त हुनेछ। यात्रा सफल हुनेछ। मन खुशी रहनेछ। सोच, समर्पण र मेहनतलाई विश्वास गर्नुहोस्। पूँजी लगानीको विस्तार सम्भव छ। काममा तपाईंको महत्त्व बढ्नेछ। जीवनसाथीसङ्ग वि,वाद हुन सक्छ। विरोधीहरू...
मेष:- शुभ समय रहेको छ। बकाया रकम प्राप्त हुनेछ। यात्रा सफल हुनेछ। मन खुशी रहनेछ। सोच, समर्पण र मेहनतलाई विश्वास गर्नुहोस्। पूँजी लगानीको विस्तार सम्भव छ। काममा तपाईंको महत्त्व बढ्नेछ। जीवनसाथीसङ्ग वि,वाद हुन सक्छ। विरोधीहरू शान्त रहनेछन्।
वृष:- विवाहित जीवन राम्रो रहनेछ। चोटपटक र रोगको रोकथाम गर्न सम्भव छ। पाहुनाहरु आउनेछन्। शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। आम्दानी हुनेछ। व्यावहारिक सम्बन्धको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। आर्थिक सोच परिवर्तन हुनेछ। व्यापारमा दिगो अवसरहरू बढ्नेछन्। व्यर्थ मा आफ्नो समय ब,र्बाद नगर्नुहोस्
मिथुन:- स्वास्थ्यमा खर्च हुनेछ। रीसलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। अपरिचितहरुलाई विश्वास नगर्नुहोस्। विवाद नगर्नुहोस्। बोलीमा संयम राख्नुहोस्। पारिवारिक समस्याहरूको समाधान हुनेछ। व्यावसायिक रूपमा, समय लाभदायक हुन सक्छ। सम्पत्ति विवादहरूको समाधान हुनेछ।
कर्कट:- प्रशंसा हुनेछ। प्रतिष्ठा रहनेछ। अधिकांश कार्यहरू सफल हुनेछन्। व्यापारमा प्रगति राहत हुनेछ। परिवारमा रमाइलो, सौहार्दपूर्ण वातावरण हुनेछ। निर्णयमा स्पष्टता हुन्छ। जोखिम र संपार्श्विक कामबाट बच्नुहोस्। लापरवाह नहुनुहोस्। प्रयासहरू सफल हुनेछन्।
सिंह:- खुशीको साधन भेला हुनेछ। नयाँ योजना बनाइनेछ। कार्यप्रणालीमा सुधार हुनेछ। आम्दानी हुनेछ। प्रतिष्ठा बढ्नेछ। व्यापारमा राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा सुख वृद्धि हुनेछ। आकस्मिक लाभहरू हुने संभावनाहरू छन्। सतकर्मामा रुचि हुनेछ। बोलिलाइ संयम राख्नुहोस्।
कन्या:- रोजगार बढ्नेछ। कुनै ठूलो काम गर्न खुसी हुनेछ। व्यापारिक यात्रा सफल हुनेछ। त्यहाँ प्रोत्साहनजनक समाचारहरू हुनेछन्। सोच्न को लागी अनुकूल परिस्थिति रहनेछ। स्थायी सम्पत्ति खरीदको सम्भावना हुनेछ। रोजगारीमा बृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ।
तुला:- आय र खर्च बराबर रहनेछ। धैर्यवान हुनुहोस् यात्रा कष्टकर हुन सक्छ, यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। प्रत्येक क्षेत्रमा सावधानी अपनाउनु पर्छ। वातावरण अनुकूल भए पनि काम हुने छैन। घाटा चोट, चोरी र विवाद आदि को कारण सम्भव छ। जोखिम र संपार्श्विक कामबाट बच्नुहोस्।
वृश्चिक:- दौडधुप हुनेछ। साना चीजहरूले स,मस्या निम्त्याउँछ। काममा साधारण त,नाव हुनेछ। पारिवारिक स,मस्या हुन सक्छ। विरोधीबाट सावधान रहनुहोस्। यात्रा हुन सक्छ। चोटपटक र रोगबाट बच्नुहोस्। दु:खद समाचार फेला पार्न सकिन्छ। बोलिलाई नियन्त्रण गर्नुहोस् जोखिमका कार्य नगर्नुहोस्।
धनु:- यात्रा सफल हुनेछ। अदालत र सरकारी काम सम्हाल्नेछ। आध्यात्मिकतामा रुचि राख्नेछ। धन प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ। आजीविकामा नयाँ अवसरहरू हुनेछन्। तपाईको प्रयासबाट समस्याको समाधान सम्भव छ। विद्यार्थीहरूले अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। परिवारमा खुशी, उत्साह हुनेछ।
मकर:- वैवाहिक प्रस्ताव आउन सक्छ । खानपिनको कुराको ख्याल राख्नुहोस्। रचनात्मक कार्य हुनेछ। सीमित आर्थिक योजना। प्रलोभनबाट जोगिनुहोस्। नयाँ कुरा नगर्नुहोस्। संतान पक्ष कमजोर हुनेछ। बोलिलाई नियन्त्रण गर्नुहोस् लेनदेनमा सावधान रहनुहोस्। राज्य समर्थन हुनेछ।
कुम्भ:- खुशीको साधन भेला हुनेछ। सम्पत्ति कार्यले लाभ उठाउनेछ। रोजगार पाउने सम्भावना रहेको छ। मन खुशी हुनेछ। आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक हुनेछ। जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुनेछ। परोपकारीबाट सन्तुष्टि कमाउनु हुनेछ। व्यापारले, रोजगारले लाभ गर्छ। अरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ। शत्रुहरू पराजित हुनेछन्।
मीन:- पार्टी र पिकनिकको आनन्द मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गमा सफलता हुनेछ। पुराना कामहरूले यसको विपरित असर गर्न सक्दछ। समयमै निर्णय नलिनुको कारण व्यवसायमा घाटा हुन सक्छ। क्रो,ध र उत्साहबाट टाढा रहनुहोस्। रोग, ड,र र चिन्ताको वातावरण हुन सक्छ।
प्रकाशित मिति २०७७ माघ २३ गते शुक्रबार ०१:३६
घरको मन्दिरमा यी ४ चिज राख्नुहोस सधैं प्राप्त गर्नुहुनेछ, माता लक्ष्मीको आशीर्वाद ।
बलिउडकी क्यूट गर्ल आलिया भट्टले न ल,जाई बेडरूम सिक्रेट बताएपछि…
प्रियंका चोपडा र निक जोनस सरोगेसी मार्फत बने आमाबाबु ।
हालैमा अर्जुन कपूरसँगको ब्रे,क अपको हल्ला सँगै नयाँ फोटोशुटमा मलाइका अरोरा पारदर्शी ड्रेसमा निकै बोल्ड शैलिमा देखिएकी छिन् ।
निकै छोटो ड्रेस लगाएर एक कार्यक्रम मा पुगेकी अभिनेत्री कृति सेनन को भित्री बस्त्र सबै देखियो र क्यामेरामा कै,द भयो, अनि ट्रो,ल हुन पुगिन। हेरौ यी तस्बिरमा ।
वलिवूडकी कान्छी अभिनेत्री जान्वी कपूरको जलपरी अवतारमा बोल्ड शैलीले लट्ठै फ्यानहरु.. हेरौ तस्बिरसहित।
४ महिने ग,र्भवति शाहिद कपूरकी पत्नी मिरा राजपुत साथिको बिहेमा से,क्सि पहिरनमा पुगेपछि । हेरौ यी तस्बिरमा।
वलिवूडकि कान्छी मोटि मोटि हट अभिनेत्री जान्वीको पारदर्शी पहिरनमा हट पोजले, लट्ठै फ्यानहरु….
फेशनको नाममा प्यान्ट्को बटम खोल्ने देखि मोजाको ब्रा लगाउदै चर्तीकला देखाउदै बिग बोस ओ टि टि फेम उर्फि जवेद हेरौ केही तस्बिरसहित ।